I-Mactracker ibuyekeziwe yengeza i-MacBook Pro entsha nezilungiso | ngivela ku-mac
I-Mactracker ibuyekeziwe yengeza i-MacBook Pro entsha nezilungiso
Uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu lokuthola ngokuningiliziwe zonke izici, intengo, usuku lokukhishwa kanye neminye imininingwane yamadivayisi we-Apple ngaphandle kokungabaza iMactracker. Le encyclopedia enhle ye-Apple ngefomethi yohlelo lokusebenza manje isibuyekezelwe i-Mac ingeza I-14-inch MacBook Pros entsha, I-16-inch MacBook Pros futhi ngokusobala ingeza ukulungiswa kweziphazamisi.
Bonke labo abangenalo uhlelo lokusebenza olulandwe ku-Mac yabo bangakwenza lokho ngokuphelele free kusuka ku-Mac App Store. Ngaphandle kokungabaza kuwuhlelo lokusebenza olungcono kakhulu lokwazi yonke imininingwane yamadivayisi we-Apple nesoftware, kusukela ku-Apple I yokuqala kuya kweyakamuva eyi-16-inch MacBook Pro.
Lolu uhlelo lokusebenza oludingayo ukwazi konke mayelana namadivayisi we-Apple
Lokhu kungenye yalezo zicelo esingakhathali ukuzincoma ukuthi ngiyi-Mac futhi ngukuthi noma yiluphi ulwazi odinga ukukwazi ngemishini ye-Apple, isoftware noma okufanayo kuzotholakala kulo. Ingenye yalezo zicelo ebilokhu ifakiwe kuma-Mac ami futhi engisiza ezikhathini eziningi uku yazi yonke imininingwane yemikhiqizo yenkampani kusuka Cupertino.
Thola umkhiqizo ngenombolo yawo kamazisi, ngosuku owethulwe ngalo emakethe noma ngisho nenani lawo lokuqala ngezinye zezimfanelo zalolu hlelo lokusebenza. Ngaphandle kokungabaza, uhlelo lokusebenza olunconywa ngokuphelele. Singathola IMactracker ku-Mac App Store imahhala ngokuphelele. Lapha ngezansi sikushiya isixhumanisi esiqondile esitolo sohlelo lokusebenza lwe-Mac, kepha futhi une-Mactracker etholakalayo yamadivayisi we-iOS.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » I-Mactracker ibuyekeziwe yengeza i-MacBook Pro entsha nezilungiso
I-TSMC yenza imali eningi ngenxa ye-Apple